Soo dejisan Bitdefender Total Security 24.0.16.91 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudBitdefender Total Security
Bogga rasmiga ah: Bitdefender Total Security
Bitdefender Total Security – badeeco casri ah oo casri ah si looga ilaaliyo noocyada kala duwan ee degaanka iyo shabakadaha khatarta. Nabadgelyada laba-dhinac leh ee la dhisay ayaa raadinaya xiriirka ay sameeyeen barnaamijka lagu rakibay waxayna bixisaa kantarool sare oo isku xirka shabakadda. Bitdefender Total Security wuxuu isticmaalaa teknoolajiyada nabadgelyada nabadgelyada si loo ilaaliyo PC wakhtiga dhabta ah ee ka dhan ah hanjabaado kasta, weerarka shabakada, spam, iyo ransomware. Kumbuyuutarku wuxuu taageersan yahay baaritaanka sare ee nidaamyada hanjabaado leh oo isla markiiba tirtiraya ama xayiraya hanjabaadaha noocan ah, xitaa haddii aysan firfircooneyn. Bitdefender Total Security wuxuu bixiyaa macluumaad la ilaaliyo oo lagu kalsoonaan karo iyo xogta gaarka ah, taas oo ay ku xirantahay maamulaha erayga sirta ah, codsiyada feylka, internetka bangiga amaanka, habka xakamaynta waalidka, ilaalinta webka, VPN, iwm. Bitdefender Total Security wuxuu leeyahay dhexdhexaad fudud oo la adeegsado iyo qalabka wax lagu dhisay si loo hagaajiyo waxtarka PC.
Antispyware, antimalware, antifouping
Dab-damis laba-dhinac ah
Kahortaga weerarka shabakada
Internet-bangiga oo ammaan ah
Codeynta codka iyo VPN
Soo dejisan Bitdefender Total Security
Faallo ku saabsan Bitdefender Total Security
Bitdefender Total Security Xirfadaha la xiriira
Liiska Tusaha & Daabacaadda – maamulaha buugga oo leh tiro hawleedyo waxtar leh si loo maareeyo feylasha, iyo sidoo kale liistada iyo daabacaadda fayl ama tusmada buugga.